Qabyaaladeynta Baraha Bulshada
Thursday July 08, 2021 - 09:30:31 in Articles by Hadhwanaag News
Waxa ooda soo jabsaday oo aan weli dhinacooda dhulka la dhigin warbaahinta baraha bulshada (Social Media), oo aynu ka xusu karno; Messenger, Facebook, Twitter, Instagram, Skype, WhatsApp, Snapchat, Linkedin, Tumblr, Fickr, Reddit, Quora, Vine, Bizsugar, Imo IWM. Warbaahintan baraha bulshadu bilowgii hore waxa ay ku bilaabmeen qoraal, waxa xigay cod, waxa ku sii xigay muuqaal, hasayeeshee haatan intuba hal meel ayey ku wada jiraa. Adduunka dadka ku nooli siyaabo kala duwan ayey u adeegsadaan warbaahinta baraha bulshada, oo bulsho kastaa waxa ay waafajisaa duruufahooda nololeed. Waana xidhiidh fiican oo weliba ka jaban Tilifoonnadii hore loo adeegsan jiray. Adeegsigaasi wuxuu noqon karaa mid taban iyo mid toggan.